Guddoomiyaha Guurtida oo dar-daaran u jeediyay Axsaabta siyaasadda | Somaliland.Org
Guddoomiyaha Guurtida oo dar-daaran u jeediyay Axsaabta siyaasadda
November 16, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddoomiyaha Golaha Guurtida Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa laba Guddi oo ka mid ah xildhibaanada Guurtida u kala diray gobolada bariga iyo galbeedka Somaliland kuwaasi oo ka qayb-qaadan doona wacyigelinta doorashada deegaanka ee fooda inagu soo haysa awgeed.
Guddoomiyaha Golaha Guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan oo maanta sii sagootiyay labadan Guddi ee u ambo-baxay goboladda dalka ayaa kula dardaarmay in ay ka qayb qaataan xoojinta amniga, isla markaasi bulshada ay ku wacyigeliyeen in si nabadgalyo ah u dhiibtaan codkooda maadaama ay soo dhawday wakhtigii qabsoomida doorashada deegaanka.
Saleebaan Maxamuud Aadan waxa uu farriin dardaarana u diray masuuliyiinta ururadda ku tartamaya doorashooyinka golaha deegaanka, waxaanu xusay guddoomiyuhu inuu soo dhaw yahay gabagabada olalihii doorashooyinka ka dibna la qaban doono doorashadii.
Guddoomiyuhu wuxuu ku baaqay in masuuliyiinta asxaabta xil ka saaran yahay dhawrista nabad-gelyadda dalka kuna qancaan natiijadda laga soo saaro doorashada deegaanka. Md. Saleebaan Maxamuud waxa uu sheegay in haddii ay si nabad-gelyo ah u dhacdo doorashaddu inay wax ka tari doonto siyaasadda dibada Somaliland.
Guddoomiyuhu waxa uu si gaara u soo qaatay inuu ka mid ahaa masuuliyiintii furtay ururada siyaasiga ah, doorashooyinkii ugu horeeyey ee goleyaasha deegaanka, isla markaasina uu noqday masuul ku qancay natiijadii rasmiga ahayd ee lagu dhawaaqay, taasina ay tahay mid waajiba, waxaanu tilmaamay inay lagama maarmaan tahay dhaba Somaliland qaaday ee isu tanaasulka ay tahay mid ay kaga hortagi karto cadowga ay Somaliland leedahay.
Previous PostWaxgaradka Murashax Nuux Maxamed Ku Bogaadiyey bilowga jid Laami ah oo uu bilaabayNext PostGaryaqaanka Guud oo jawaab ka bixiyay warbixinno ka soo baxay Guddida Anshaxa	Blog